Ziyaveva izitabane ngenkulumo kaNala | Isolezwe
Ziyaveva izitabane ngenkulumo kaNala
Izindaba / 10 August 2017, 10:01am / ZANELE MTHETHWA
UDr HQ Nala ocasule izitabane ngenkulumo yakhe yokuthi uselaphe eziningi ngamanzi akhe. Isithombe: THOKOZANI NDLOVU
ZIYAVEVA izitabane ngenkulumo kaDkt Hamilton Nala ayenze esontweni lakhe ngoLwesihlanu olwedlule lapho ethe seziningi asezilaphile esebenzisa amanzi akhe.
izitabane ezicasulwe yile nkulumo sezisabise ngokuyisa uDkt Nala enkantolo.
UNala ozibiza ngenkosi yesizwe soMnala, ukusho lokhu eqopha iCD neDVD yeTehillah Songs esontweni lakhe kuGale Street, eThekwini.
Ubencoma amanzi akhe abizwa ngeFaith Water, athe ayasebenza, asesize nokuguqula abebeyizitabane. UMnuz Sbo Khumalo okhulumela iDurban Lesbian and Gay Community and Health Centre, uthe banengekile yile nkulumo kaNala ezofaka umqondo omubi kubazali abanezingane eziyizitabane.
“Sizoya esontweni lakhe siyoqhinqa, sikhangeze amanzi angcwele lawa athi ulapha ngawo izitabane. Sifuna aveze athi usebalaphile, esingazi noma babeyizitabane ngempela yini. Ubutabane abusona isifo kodwa uzalwa nabo, kungenzeka ukuthi akhuluma ngabo babezigangela nje,” kusho uKhumalo.
Uthe kuyimanje babhala incwadi abazoyifaka eNkantolo yezokuLingana, bafake isikhalo ngoba okwenziwa uNala kukhombisa ukucwasa nokwehlisa isithunzi.
“Okusikhathazayo wukuthi abanye abantu bayakukholwa okushiwo ngabaholi, akumele bona badukise abantu ngezitatimende zabo. Sehliswe isithunzi ngalesi sitatimende,” kusho uKhumalo.
Enkulumweni yakhe uNala uthe, “Baningi abebeyizitabane asebesindile ngenxa yeFaith Water. Kumanje bashadile banemizi basindiswe iyona. Uma uthanda ukuba yisitabane qhubeka nakho kodwa ngiyakutshela, iyabukhipha ubutabane ibulahle le kude.
Okhulumela iNala Mandate uPastor Favour Mabaso, uthe inkulumo kaNala ibiveza akholelwa kukho nesizwe sakhe. Uthe abanankinga nabantu abazikhethela ukuba yizitabane kodwa abakuvumeli ebandleni labo.
“Esontweni sisiza ukukhipha umoya okumuntu. Sikholwa wukuthi ubutabane, wumoya ongena kumuntu njengotshwala, uma kuthandazwa kusuke kukhishwa lowo moya. Abekhuluma ngabo singabaveza ngoba nenkosi ibithathela ebufakazini obenziwe yibona,” Kusho uMabaso.
Uthe inkulumo kaNala iyakhombisa ukuthi uyakuqonda ukuthi ukuphila nobutabane wukuzikhethela njengoba eshilo ukuthi abafuna ukuba yizitabane abaqhubeke nakho. UMabaso ugcizelele ukuthi amanzi nomkhuleko kaNala awelaphi ubutabane kodwa kukhululwa umuntu emoyeni omngenile, okuyinto abasamile kuyona.